Phalcon Framework PHP haingana indrindra izao Available | DDNS Cloud Hosting News!
Home » Cloud Hosting » Phalcon Framework PHP haingana indrindra izao Available
Phalcon haingana indrindra Framework PHP amin'ny aterineto izao Available!
Speed ​​manana lehibe eo amin'ny maha zava-dehibe ny mahazo ambony fikarohana filaharana, kosa fampisehoana Optimization lasa ambony ny laharam-pahamehana ho an'ny orinasa IT.
The hosting industry and webmaster’s march toward faster load times has fuelled the birth of Phalcon – a solution, izay manolotra ny vaovao amin'ny fomba fanatsarana tranonkala fampisehoana.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny rafitra Phalcon, the advantages it can bring to your online projects and how you can make use of it on our tranonkala fampiantranoana sehatra.
Misy Quick History Of Phalcon
Tamin'ny voalohany nivoaka tamin'ny 2012, Phalcon is ny open-source PHP rafitra fampiharana tranonkala licensed under the terms of the BSD License.
Ary nisy namorona ny Andrés Gutiérrez izay niara-niakatra tamin'ny hafainganam-pandeha vaovao-mifantoka PHP fampandrosoana rafitra fampiharana tranonkala fomba.
Ny anaran 'ny rafitra mihitsy tonga Tsy mahagaga, satria hitsikitsika haingana indrindra no eo amin'ny biby eto An-tany.
Tsy toy ny ankamaroan'ny rafitra PHP, Phalcon mbola torontoronina ho toy ny habaka mpizara fanitarana.
Mpanoratra in Zephir sy C, Izany dia midika hoe mifototra amin'ny modely-view-maso (MVC) lamina.
Koa satria ny voalohany Phalcon famotsorana, ny mpandraharaha efa nitandrina fanatsarana ny rafitra amin'ny fampidirana ny fampisehoana vaovao-boosting endri-javatra. Anisan'izany ohatra ny môdely volt maotera.
Phalcon voalohany PHP 7 fanohanana-manavaka LTS fanafahana nampidirina tamin'ny 29 Jolay 2016. Izany ihany koa ny rafitra milamina ny farany dika hatreto.
SemVer dia niankina eo amin'ny ho avy ihany koa.
Phalcon ny fototra tombony ny mahazatra kokoa PHP rafitra
Phalcon dia haingana lazan'ny noho izy nahazo ny haingana indrindra rafitra PHP amin'ny aterineto.
Ary ara-drariny izany, nanomboka nandinika ny manidina sy ny isan'ny fanatsarana ho any amin'ny trano ao dia fohy ny fotoana.
Naorina ho toy ny habaka mpizara fanitarana fa tsy toy ny mijanona-irery PHP rafitra, Phalcon mamela ho revolisionera fampisehoana Optimization.
Ireto ny antony fototra Phalcon lasa ny handeha-to vahaolana ho an'ny hafainganam-pandeha-mifantoka aterineto tetikasa:
Nampiroborobo famonoana hafainganam-pandeha
Noho ny zava-baovao Coding foto-kevitra, Phalcon mamela ny fangatahana HTTP bebe kokoa mba ho ampiasaina isan-tsegondra (raha oharina amin'ny rafitra mitovy voasoratra voalohany indrindra amin'ny PHP), izay mampihena ny fankamamiantsika fotoana famonoana tanteraka.
Nihena loharano fampiasana
Phalcon dia mamela anao hitandrina CPU sy ny fitadidiana fanjifana amin'ny kely indrindra.
Tranonkala haingana fampisehoana
Ny nampidinina fotoana namonoana sy ny entana dia hanafaingana ny ankapobeny ny toerana fampisehoana, izay, mifandimby, mitarika ho amin'ny tsara kokoa fikarohana filaharana ary nitombo tsindrio-amin'ny alalan'ny tahan'ny.
Phalcon fampiantranoana afaka eo amin'ny sehatra
Tsy toy ny tsy tapaka rafitra PHP, Phalcon tsy azo mora napetraka.
Aza miala ao an-tsaina fa manohana ny PHP Phalcon dikan avy 5.5 handroso:
Check out our cloud web hosting plans with Phalcon ETO!
Misaotra mamaky teny
100% Free Website Ady amin'ny DoneRite Domain Name Services!